Ukukhangela nokuthenga i-Junior Skis yabantwana
Ukufumana i-Skis Kids Skis
Kanye njengoko abantwana bekhupha iingubo zabo, baya kukhwela i-skis yabo. Sisiphi isayizi se-skis esifanele siyithenge kubantwana bethu kwaye sinokuyidlulisela ukuya kubini elilandelayo labantwana?
Ukukhetha i Skis Junior
Impendulo kukuba kukho impendulo engaphezulu kweyodwa! Nangona kunjalo, xa ubeka ndawonye umfanekiso we-ski for each child, kuya kuba lula ukufumanisa ukuba yeyiphi i-skis ukuyibeka. Nanku ukujonga indlela yobudala bomntwana, ubungakanani, ixesha labo ezintabeni kunye nento abayenzayo kwimithambeka inokunquma i- skis engcono yokuthenga.
I-caveat nayiphi na inkcazelo ebanzi malunga ne-skis yolutsha kukuba akusiyo inzululwazi ngqo. Umhlaba ukuya kwelinye icala, inkunzi, njl. Ubude obundichazayo ngasentla ngumyinge wento oyifumanayo kwiivenkile ze-ski kunye neendawo zokuqashisa. Olu hlobo lwesigaba seqaqa sithatha iisisindo ukuya kwii-135 ukuya kuma-140.
Unokufumanisa ukuba izitolo ezi-5 ezahlukeneyo ze-ski zingancoma ubude bomitha obude obuhlukeneyo bobuhlanu kumntwana (bonke abakhiqizi be-ski basebenzisa i-metric scale for length and width). Nangona kunjalo, zonke iinqununu kufuneka zisebenze kuba kukho ezinye iinguqu ezikhoyo.
Uhlobo lweeJunior Length Variables
Iintlobo ezininzi ziyakwenza isicelo, ukuqala ngento yokuba ezahlukeneyo zezinto ze-ski zenza imizekelo yazo ngobude obude. Ukuba i-Ski Shop A ithengisa iVolkl inokuthi iphakamise imodeli eyi-140cm ngelixa i-Ski Shop B isebenzela iRosssignol kwaye inikeza umfana olinganayo kwi-142cm. Kwakhona, xa abanye abantwana bebade okanye banzima, umthengisi uya kukhetha i-ski edeleyo esekelwe kakhulu kumava abo athengisa.
Umgca ophantsi - uthenge i-skis yengane yakho kwivenkile eyaziwayo ye-ski kunye nabasebenzi abaqeqeshwe.
I-Skis yabantwana abancinci
Into enhle ukuyikhumbula xa siqala ukuzisa abantwana abancinci ukukwikrala kukuba ukujikeleza ngekhephu nge-skis kufuneka kulonwabe - ukuhamba ngeqhwa kuza emva koko. Ukugcina ukuzonwabisa kuthetha, ngokubanzi, ukubeka abantwana aba-3 nangaphantsi kwiibini ze-skis eziza ngokukhawuleza, phakathi kwegxala kunye ne-chin.
Ubude bubavumela ukuba bazive uvakalelo lwe-sliding kodwa basenokukwazi ukujikeleza, ukuphakama, kunye nesinyathelo esinqamle okanye isilayidi kunye ne-glide. Isikolo samaziko okufundela i-Ski konke oku kukuzonwabisa kwaye abantwana benza ngcono kwi-skis baziva bekhululekile.
Oku akutshoyo ukuba akukho nabantwana abavuthayo "kwiminyaka emithathu ubudala, kodwa abo babantu abancinci bahlukile. I-skiing yinto yokuzonwabisa xa usaphila kwaye uqaliswa kuyo ngendlela edlalwayo kwaye ejabulisayo yenza ukuba abantwana bafune ukwenza kwakhona.
Skis Beginner Skis
Xa abantwana befikelela kwiminyaka engama-4 okanye emihlanu ubudala, ubunzima bobubanzi kunye nokuphakama kuya kwi-equation xa ukhetha iikhredithi zabaqalayo. Sifanele sicinge ngezinto zombini, kuba i-skuni ezincinane, ngokubanzi, zenziwe ngezinto ezincinci, eziphambili. Ekubeni abantwana bengenawo umzimba womzimba wokubhinqa iiskrikhi ezinzima, abavelisi benza i-skis ibe yinto eguquguqukayo ngakumbi ukugoba kwi-arc eyenza i-skis ebombele kulula ukuyijika.
Ngokomyinge, oku kuya kuguqulela kulaba baqalayo basebenzi basebenzisa iikhredithi ezimi phakathi kweengxowa zabo neempumlo. Ukuba unqwenela ukwenza lo mlinganiselo kusenokwenzeka sebenzisa i-intshi / centimeter tape measure, okanye uguqula amasentimitha ngokusebenzisa 1 intshi = 2.54cm. Ukuba i-skier yakho yokuqala ye-skier isisilinganisi esifanelekileyo kwaye ingama-intshi engama-45 ukuya kwilomo eliphezulu (45 x 2.54) khangela i-skis kufuphi ne-115cm.
Ndicinga ukuba kukulungele ukunyusa ubungakanani bendlela yokwenza isigaba se-ski ephantsi kunani lakho elibalwe ukuba awukwazi ukuba lichanekile, ngakumbi kubaqalayo.
I-Junior ephakathi kunye ne-Advanced Skis
Njengoko abantwana bafumana ixesha elide kwikhephu, uya kuqala ukubona iphethini malunga nomhlaba kwaye isantya ngasinye sihamba ngokukhululeka. Umyinge ophakathi kwinqanaba elinomnyaka okanye ezimbini kwiindawo ezininzi zebluhlaza angafakwa ngeqonga lokuzonwabisa, eliqhelekileyo elithandayo ukuze kube lula ukudweba, okulinganisa ukuya kwinqanaba lemehlo.
Akuqhelekanga ukufumana abafana abanobugwenxa, abaqhubi abanqabileyo be-skier abakhululekile kwiipaki nakwiidayimnyama ezimnyama. Ezi zintsana zidinga i-skis kwisiphelo esiphezulu sesilinganiselo somzimba - kude kube ebunzini kunye nolunye olukhethekileyo, olukhuni, i-ski ukufumana ukutshatyalaliswa kwesitayela sabo esinobudlova.
I-Tall okanye i-Junior Skier
Kukho abade kunye / okanye abancinci abaselula abanokulinganisa ukuba imilinganiselo ye-junior iyingqungquthela ikakhulu ngenxa yokuba ubunzima bomzimba wabo benza i-skis ezincinci ezingaphenduliyo ukuphendulela. Musa ukuyikwesaba, kule meko, abantwana bangakwazi ukufudula kwiqonga lomntu omdala oqalayo elincinci kodwa elithengekayo.
Bonke abenzi benzi benze i-skis encane, abanye bakwenza i-skis okanye i-freeriders yexabiso elibizayo, kunye ne- powder skis . Unokuchitha imali eninzi kwiikrithi ezincinci okanye unokufumana imodeli yokuzonwabisa ekunokulinganiswa kwamaxabiso. Emva kokuba ugqibe ubude obufanelekileyo kunye nesitayela somntwana wakho, ungayifumana i- ski good deals online .
Ukuba uthenge i-skis kwi-intanethi, qiniseka ukuba uwafake kwisitolo se-ski ehloniphekileyo ukuze ube nokubophelela. Biza phambili ukuba ubone ukuba i-shop shop i-techs ingqinisiswe ngumenzi wesimbophelo osibophe. Ukuba ufumene i-skis kunye nezibophelelo eziye zanyuka zibafake kwivenkile ukuba zibe novavanyo olubophayo kwaye iDIN echanekileyo isetyenziswe ubungakanani bomntwana kunye nobuchule bakho.
Olunye uhlobo lwexabiso lokujonga xa kuthengwa i-skuni ye-junior kukufumana isitolo se-ski esinikeza iSicwangciso soqeshiso seNkundla yokuQala apho ubuyisela i-skis ekupheleni kwexesha. Indlela enhle yokugcina abantwana abakhulayo ngokukhawuleza kwiikratshi ezifanelekileyo ngelixabiso elifanelekileyo.
Iyini Inkunzi Yenkcubeko? Ngaba Ndinayo?
Yenza 2 Funda: Iwebhusayithi enezibonelelo zeKlasi leMfundo ePhakamileyo
Izidumbu zeCellar Spillers zichazwe
Indlela Iikhamera Esilahlekisa ngayo